1 VaTesaronika 2:1-20
2 Chokwadi, imi hama, munoziva kuti kukushanyirai+ kwedu hakuna kushaya basa sei,+ 2 asi, (sezvamunoziva) pashure pokunge tatambura+ uye taitirwa zvakaipa+ muFiripi,+ takava noushingi sei naMwari wedu kuti tikutaurirei+ mashoko akanaka aMwari tichitamburira kwazvo. 3 Nokuti kurayira kwatinoita hakubvi pakukanganisa kana pakusachena+ uye hakusi kwokunyengera, 4 asi, sezvatakanzi naMwari takakodzera kuronzeswa+ mashoko akanaka, tinotaura saizvozvo, tisingafadzi+ vanhu, asi Mwari, anoongorora mwoyo yedu.+ 5 Chokwadi, hapana nguva yatakambouya tichitaura zvokungokubatai kumeso,+ (sezvamunoziva) kana kuti tichiita zvokunyengera+ kuti tichochore,+ Mwari ndiye chapupu! 6 Uyewo tave tisingatsvaki kukudzwa kunobva kuvanhu,+ aiwa, kungava kunobva kwamuri kana kune vamwe, kunyange zvazvo taigona kukuremedzai+ nezvinhu zvinodhura sevaapostora vaKristu. 7 Asi, takava norupfave pakati penyu, sezvinoita amai vanoyamwisa kana vachitarisira+ vana vavo. 8 Naizvozvo, zvataikudai kwazvo,+ hatina kungofara kukupai mashoko akanaka aMwari chete, asiwo mweya yedu,+ nokuti makadiwa+ nesu. 9 Chokwadi hama, munoyeuka basa redu nokushanda kwedu zvakaoma. Takakuparidzirai mashoko akanaka aMwari, tichishanda+ usiku nemasikati, kuti tirege kuisa mutoro unorema pane mumwe wenyu chero upi zvake.+ 10 Imi muri zvapupu, naMwari chapupuwo, kuti takava vakavimbika sei nevakarurama, vasina chavanopomerwa+ kwamuri imi vatendi. 11 Maererano naizvozvo munonyatsoziva kuti sezvinoitira baba+ vana vavo, takaramba tichirayira+ sei mumwe nomumwe wenyu, tichikunyaradzai uye tichikupupurirai, 12 kuti murambe muchifamba+ zvakakodzera pamberi paMwari ari kukudanai+ kuti muuye kuumambo+ hwake nokubwinya kwake. 13 Chokwadi, ndokusaka tichiramba tichiongawo Mwari,+ nokuti pamakagamuchira shoko raMwari,+ ramakanzwa kwatiri, hamuna kurigamuchira seshoko revanhu,+ asi, sezvariri chaizvo, seshoko raMwari, riri kushandawo mamuri imi vatendi.+ 14 Nokuti hama, makava vatevedzeri veungano dzaMwari dziri muJudhiya dziri pamwe naKristu Jesu, nokuti imi makatangawo kutambura+ zvinhu zviri kuitwa nevanhu vomunyika yenyu izvo ivowo vari kutambura zvichiitwa nevaJudha, 15 vaya vakauraya kunyange Ishe Jesu+ nevaprofita+ uye vakatitambudza.+ Uyezve, havasi kufadza Mwari, asi vanorwisana nezvinodiwa nevanhu vose, 16 sezvavanoedza kutidzivisa+ kutaura nevanhu vemamwe marudzi kuti ivava vaponeswe,+ zvichiita kuti vagare vachizadzisa+ zvivi zvavo. Asi hasha dzake pakupedzisira dzazouya pavari.+ 17 Asi isu, hama, patakanga tarasikirwa nemi kwenguva pfupi chete, panyama, kwete mumwoyo, takavavarira kwazvo kuona zviso zvenyu nechido chikuru kupfuura zvatinoita nguva dzose.+ 18 Nokuda kweizvi isu taida kuuya kwamuri, chokwadi, ini Pauro, ndaida kuuya kekutanga nekechipiri, asi Satani akatipinganidza. 19 Nokuti tariro yedu kana mufaro kana korona+ yokupembera nomufaro chii—chokwadi, hamusi imi here?—pamberi paShe wedu Jesu pakuvapo kwake?+ 20 Chokwadi imi ndimi kukudzwa kwedu nomufaro wedu.